Mutevedzeri Wemunyori Mukuru weUNWTO Sanclemente anosiya: Gustavo Santo anobva kuArgentina anotevera?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Mutevedzeri Wemunyori Mukuru weUNWTO Sanclemente anosiya: Gustavo Santo anobva kuArgentina anotevera?
Argentina Breaking Nhau • Nhau Nhau • Kuputsa Spain Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Colombia Breaking News • Hurumende Nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Pachave nemuchato wekuonekana manheru ano kuUNWTO Madrid kutaura zvakanaka kuMutevedzeri weMunyori-Mukuru weUNWTO VaJaime Alberto Cabal Sanclemente of Korombiya. Akagadzwa Mutevedzeri Wemunyori-General zve ari World Tourism Sangano (UNWTO) muna Chikumi 2018 uye dakafunga kusiya sangano mushure megore rimwe chete. Rudzi rwepamutemo nderekuti, VaSancelmente vachapinda muindasitiri yakazvimirira yekushanya.
Hazvisi pachena kuti ndiani achamutsiva anoda kushanda pamwe neMunyori-Mukuru weUNWTO Zurab Pololikashvili, asi sekureva kwenyaya dzakanyatso zivikanwa, Hon. Gustavo Santos, Gurukota rezvekushanya kuArgentina mukana wakanaka. Asati ave gurukota muna 2015 aive purofesa Zvinyorwa paNational University yeCórdoba
Gustavo Santo, Gurukota rezvekushanya kuArgentina
Akatanga basa rake muchiitiko cheveruzhinji saDirector wevechidiki mudunhu rake.
Aive nhengo yedhairekitori reImprotur, munyori mukuru weFederal Council of Tourism uye nhengo yeScientific Committee yeUNWTO.
Sekureva kwezvinowanikwa Gurukota rinongotaura Spanish.
Gurukota rezveKushanya kuArgentina Gustavo Santos, gore rapfuura vaive Sachigaro weUNWTO Executive Council. Vakati "hunyanzvi uye kushanya zvakabatana mukugadzira mikana yehupenyu kuvanhu vedu nekugadzira mabasa. "Izvi zvinosimbisa kuzvipira kwedu nebasa redu rino, iro rinotungamira mukusimudzira kwevanhu mumakore anotevera."
Muna Zvita iyo World Tourism Organisation (UNWTO) yakapa rutsigiro pakuvhurwa muArgentina kwe yekutanga yakasarudzika hub yekushanya muAmerica - Unidigital.